နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နီပေါဝန်ကြီးချုပ် တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ နီပေါခရီးစဉ်အတွင်း နီပေါဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေးကို ဆွေး နွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးဟန်ကပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့တွေက နီပေါနဲ့ မြန်မာနဲ့က အဓိကအားဖြင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရလည်း ကျွန်တော်တို့တွေက ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။ ယဉ် ကျေးမှုအရ ထိစပ်မှုရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ နောက်ပြီး တော့ ကုန်သွယ်ရေးပိုင်းမှာကြည့်ရင်လည်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ ပဲတို့၊ ဆန်တို့ဝယ်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်။ အဲတော့ ဒါမျိုးကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ရေးတို့၊ နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး မြှင့်ဖို့ ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်” ဟု ၎င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် ပြောသည်။ ယင်းအပြင် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ဆွေး နွေးရန်ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
နီပေါနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်အပြင် နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ထိကျင်းပမည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကိုလည်း တစ်ရက်တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးဟန်ကပြောသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်မူ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစသည် ဖြင့် ခေါင်းစဉ်များစွာပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အချို့လည်း တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် သီးသန့် တွေ့ဆုံမှုအနေဖြင့် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရန်သာရှိ သေးပြီး အခြေအနေအရ အခြား သော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမှုများလည်းရှိနိုင်ကြောင်း ဦးစိုးဟန်ကဆိုသည်။ ခရီးစဉ်မှာ သုံးညအိပ် လေး ရက်ခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သော်လည်း သွားမည့်ရက်နှင့် အချိန် အတိအကျကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြော ကြားခြင်းမရှိပေ။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင် ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုက ရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ကေ၊ ပီ၊ ရှာမာအိုလီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မကြာမီကာလအတွင်း နီပေါနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် မန္တလေးမြို့ သင်္ဂဇာချောင်းအတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ကာ ငါး ပိဿာချိန??